TTSweet: အော်ဇီမှာ ကြုံရသမျှ (၂)
Posted by T T Sweet at 3:17 PM
khin oo may May 8, 2011 at 5:31 PM
shin May 8, 2011 at 6:04 PM
သက်ဝေ May 8, 2011 at 6:20 PM
ဟုတ်တယ်... မမတို့ မရှင်လေးတို့ ပြောသလိုပဲ... ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတယ်...
အရှည်ကြီးရေးတော့ ဖတ်ရတာ ပိုပျော်တယ်... ဆက်ရေးပါအုံး...
ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းလေးတွေ တွေ့ရတာ အေးချမ်းလိုက်တာလို့ ထင်မိတယ်...ဓါတ်တိုင်တွေ ဓါတ်ကြိုးတွေတွေ့တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ နည်းနည်းရှုပ်နေသလို ခံစားရတယ်...။ ငြုတ်ဆုံကတော့ မြန်မာပီပီ ပေါ့...။
သမီးလေးက ကျောင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ချစ်စရာ...
ပြီးတော့ အန်တီဆွိ စလင်းဘော်ဒီလေး ဆိုတာကို ဒါ့ပုံနဲ့တကွ သက်သေပြ ဖြေဆိုပါ... ဟင်းဟင်းဟင်း...း))
ကြယ်စင်အလင်း May 8, 2011 at 6:26 PM
အန်တီဆွိရဲ့ ဘလော့ကိုကျွန်တော်ဝင်ဖတ်နေကျ..ပို့စ်အသစ်တွေ စောင့်ပြီးဖတ်၇တာလဲ အမော..ဒီတခါပထမဆုံးကောမန့်ပေးဖူးတာ. ပျော်စ၇ာကောင်းတဲ့ အန်တီဆွိတို့ မိသားစုအကြောင်းလေးတွေဖတ်၇တာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ..း)
AMK May 8, 2011 at 7:57 PM
တီတီဆွိ ငရုပ်ဆုံကြီး ပိုက်ပြီး ALDI ကထွက်လာတဲ့ ပုံ မိုက်မှာဘဲ တရုပ်ဆိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုင်တွေမှာလဲ ၇ှိပါတယ် အဲဒီ ဆိုက်ဆို ၁၃.၉၉ နဲ့ တော့ရဘူးနဲ့ တူတယ်
လမ်းလျှောက်ရတာကောင်းတယ်နော်။ နောက်ဆိုဒီထက်စလင်းဖြစ်လာမယ်ထင်တယ် :P
KK May 8, 2011 at 9:23 PM
မဆွိရေ ဂျူဂျူလေး လမ်းမလျှောက်နိုင်မှာမပူနဲ့နော်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာဆို မူကြိုကလေး (၂-၃)နှစ်ကစပြီး မူကြိုကနေ တရက်ခြား အပြင်ခရီးတိုလေးတွေ ထွက်ခိုင်းပြီး။ ထွက်ရရင် အနည်းဆုံး (၁၅)မိနစ် ခရီးကို လျှောက်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်မသမီးလေးဆို အသက်(၃)နှစ်ကစပြီး အသွားမိနစ်(၃၀)၊ အပြန်မိနစ် (၃၀) နေ့တိုင်းကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်နေ တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဝက်ဝံလေး May 8, 2011 at 10:24 PM
ဖတ်ရတာ လေးကလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ..
ဖိုးတုတ် May 8, 2011 at 11:35 PM
အားပါး ... ရေးတော့လည်း ပို.စ်ကိုဆုံးအောင်တော်တော် ဖတ်လိုက်ရတယ်၊
ကျွန်တော်လည်း နယ်မှာနေဖူးပြီး အဖေက ကြက်၊ ၀က်မွေးဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကြက်မ ဥတာတော့ မတွေ.ဖူးပါ ၊ မဆွိ ရေးမှာပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မိတော့တယ်၊
ကျွန်တော့်မှာ မြန်မာပြည်က သယ်လာတဲ့ ငရုပ်ဆုံကြီးရှိတယ် ၊ အသိတစ်ယောက်က သယ်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သွား လို. ပေးခဲ့တာပါ၊ ကျွန်တော် မသုံးဖြစ်တာတောင်တော်တော် ကြာပေါ့၊ ဒီလိုမှန်းသိရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ငရုပ်ဆုံကြီးပေးလိုက် ပါတယ်၊
စင်ကာပူမှာရှိတဲ့သူများ ငရုပ်ဆုံလိုချင်ရင် မဆွိဘလော့ စီဘောက်က ဖုံးနံပါတ်ကြေညာလိုက်ပါ ၊ ကျွန်တော် ဆက်သွယ်ပြီး လာယူဖို.စီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်၊
khin May 9, 2011 at 4:11 AM
ma ma sweet,
I think you can use the bike if you want. I live in Washington DC, andalot of people use bike for everyday because of terribly terrific. And Ju Ju might be happier to go to school. Enjoy!! And I warmly welcome your family to visit to DC. You will see capitol bike share in everywhere of DC metro area, so we can go around DC and watch the white house by riding bikes.
yinetaezinyaw May 9, 2011 at 8:36 AM
ဟားဟား တီဆွိရဲ့ ခေါင်းအုံးအကြောင်းဖတ်ပြီး ရီမိပါတယ်။ ဇင်ယော်လည်း ရောက်ခါစက အဲ့အမွှေးတွေနဲ့ခေါင်းအုံးအိပ်ရတာ တော်တော်အဆင်မပြေတာ။ တီဆွိပြောသလို ဘဲမွှေးနံ့နံ့တာရော ရန်ကုန်က လဲမှို့ခေါင်းအုံးလိုမာမာလေးမဟုတ်တော့ တစ်လုံးတည်းအိပ်ရင် ဘယ်လိုမှအဆင်ကိုမပြေတာ။ အခုတော့လည်း အဲ့အနံ့တွေနဲ့ယဉ်သွားပါပြီ။ စောင်ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းအုံးဖြစ်ဖြစ် အသစ်ဆိုရင်တော့ အနံ့ရှိပါတယ်။ ၃ ၊ ၄ ရက်လောက်ဆိုရင် မနံတော့ပါဘူး။
T T Sweet May 9, 2011 at 10:50 AM
စက်ဘီးစီးဖို့ အကြံ စလုံးမှာတုံးက Google Earth ကနေ ၀င်ကြည့်တုံးကတော့ စိတ်ကူးမိသေးသဗျ။ ဒီရောက်တော့ ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်ကြည့်တော့ ကုန်းတက်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ၃၀ဒီဂရီလောက်တော့ရှိမယ်။ Gradient က။ ဒီမှာတင် စက်ဘီးစီးဖို့ အကြံ လက်လျှော့လိုက်တယ်။ ကုန်းတက်ကုန်းဆင်းပေါတဲ့နေရာဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲ စီးတာ မတွေ့ဘူးခင်ည။
ငှက်မွှေးနဲ့ဟာတော့ အောက်က ခံအိပ်တာတောင် အနံ့ဒီလောက်ထွက်နေတာ။ အဲ့ပေါ်တိုက်ရိုက်အိပ်ရင် ဘယ့်ဂလောက်တောင်နံမလဲ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။း)
ကဲ ကဲ ... ငရုပ်ဆုံ လိုချင်သူများ ကိုဇီ သိစေရန် စီဘောက်မှာ ဖုန်းနံပတ် ရေးသွားကြပါကုန်း)
ဘယ့်နှယ် ဘလော့ဂ်မှာ ငရုပ်ဆုံအလှူနဲ့ တိုးနေတယ်း)
So far, so good, except cold weather. Thanks.
KK ပြောမှ လမ်းလျှောက်တဲ့ ကိစ္စ ပိုခိုင်သွားပြီ။ ကိုယ်က ခလေးကိုပဲ လမ်းလျှောက်ရလို့ သနားနေတာ။
များရဲ့ ငရုပ်ဆုံကြီး သူအားကျနေပြီ ထင်တယ်း)
ပထမကြည့်တာ တရုတ်ဆိုင်ထင်တယ်။ ငရုပ်ကျည်ပွေ့သေးသေးလေးဆိုတာ။ ဗီယက်နန်ဆိုင်တွေတော့ မရောက်သေးဘူး။ မဆွိ်တီတို့နေတဲ့နားက တရုတ်ရပ်ကွက်ဗျ။
စောင့်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအမြဲတင်လျက်ပါ။ အဲလိုကွန့်မန့်လေးတွေက ရေးဖို့ အတွက် ခွန်အားတွေပါပဲ။
ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ သက်သေပြရမှာလား ... မျက်နှာစာအုပ်မှာ လာမည် ... မျှော် ... ဒီထက် ပိုစလင်းဖြစ်အောင် ထမင်း၇ရက် မစားပဲ တင်ပေးမည် .... မျှော် ... ... ... ;))
ရှင်း၊ အနောနိမတ်စ် အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူး။
တို့ အန်တီကွန်းကလဲ စောစောစီးစီး ဖတ်ပြီး လာအားပေးသွားသဗျ။ ရှဲရှဲ့နီ အစ်မ။
အင်း ငရုတ်ကျည်ပွေ့ ကတော့ အားရပါးရပဲ။
ရန်ဖြစ်စရာတော့ မရှိပါဘူး မို့ လာ?
ချစ်ကြည်အေး May 9, 2011 at 7:27 PM
၁နဲ့၂ တခါတည်းဖတ်သွားတယ် မတ်စိရေ...။ အိမ်လေးတွေ လမ်းလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ...။ အေးချမ်းလိုက်တာ။ မတ်စိ လက်မီးကင်နေပုံကိုကြည့်ပြီး ဝိတ်ကျသွားတာ ထောက်ခံပါ၏။:P သမီးဂျူဂျူကိုလည်း အန်တီချစ်ကြည်အေးက သတိရတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါနော်...။ အော်ဇီက အတွေ့အကြုံတွေကို စောင့်ဖတ်နေပါမယ်။ အဆင်ပြေရင် ကိုအန်ဒီတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း ထည့်ရေးပါဦး ဆွိရေ....
ခနွဲ May 10, 2011 at 2:18 AM
ဇွန်မိုးစက် May 11, 2011 at 1:46 AM
မဆွိရေ...ကြုံရင်ကြုံသလို...သတိရရင် ရသလို ၀င်ဝင်ဖတ်ပါတယ်။ အော်ဇီက အတွေ့အကြုံသစ်တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ရအောင် လင့်ခ်ယူသွားတယ်နော်။း)
Anonymous May 14, 2011 at 11:47 AM
she want to show how she stay in EU.
အလုပ်သစ် ရောက်သွားတည်းက ဘာစာမှ မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး ဖြစ်နေတာ။ သတိရလို့ လာကြည့်သွားတယ် တီဆွိရေ..
Natthamee October 4, 2012 at 4:33 PM
T T Sweet October 5, 2012 at 9:17 PM
ကြိတ်စက်အိမ်မှာ ရှိပါတယ်။ ထောင်းချက်ရတာမှ အားရတယ်။ ကြိတ်စက်က chopping ပဲလုပ်တာ။ မညက်တော့ ချက်လို့ မကောင်းဘူး။ မြန်မာ့ရိုးရာ ငရုပ်ဆုံနဲ့ထောင်းချက်မှ ဟင်းကပိုကောင်းတယ်လို့ စွဲနေတယ်။